Muhiimadda astaan ​​u yeelashada naqshadaha bogagga iyo ururada. | Abuurista khadka tooska ah
El logo Waa sheygaas oo qeexaya astaan ​​loona isticmaali karo sanado badan, iyadoo laga aqoonsan yahay adduunka oo dhan. Waa macno ahaan wejiga shirkad ee internetka. Taasi waa sababta dhammaan walxaha u socda sameynta astaanta ay muhiimad weyn u yeelan doonaan.
Waana hubaal in astaantu ay tahay dhamaadka mid ka mid ah shaqooyinka ugu adag ee ay fulinayaan naqshadeeyaha, haddii aysan ahayn kuwa ugu badan. Tani waxay ku lug leedahay sameynta jimicsi maskaxeed iyo jireed labadaba si loo helo Isku-dhafka wax kasta oo qeexaya shirkad, astaan ​​ama astaan ​​isla markaana u matala garaaf ahaan iyada oo loo marayo shaabad yar.
1 Xaddidaadda marka la samaynayo astaan
2 Furaha guusha
3 Muhiimadda jawaab celinta
Xaddidaadda marka la samaynayo astaan
Waqtiga la abuurayo astaanta bog gaar ah, waa run in ay jiraan arrimo badan oo ay tahay in ay gebi ahaanba noqdaan natiijada malaha naqshadeeyaha, laakiin sidoo kale waxaa jira xaqiiqooyin badan iyo heshiisyo ay tahay in la fuliyo haddii aad rabto inaad hesho natiijo fiican, tusaale ahaan, meelaynteeda qaabeynta 'qaabeynta' websaydhka. Immisa calaamadood oo aad aragtay oo aan ku oollin bidixda sare ee bogga? Waana inay jirto shuruud aan qasab ahayn oo lagu dhejinayo shaabaddaas booskaas maxaa yeelay isticmaaluhu wuxuu horeyba u rajeynayaa in halkaas lagu dhigo tan iyo bilowgii.
Waana in filashadu ay door aad u muhiim ah ka qaadato isticmaalka.
Waxaa la cadeeyay in astaamaha oo la dhigo meel aan aheyn tan aan kor ku soo sheegnay ay dhaawici doonto bogga oo uu noqon doono 6 jeer ka sii adag ku noqo shaashadda guriga aqristaha. Waxa kale oo jira xaddidaadda ay astaantu lafteeda soo saarto. Filasho cusub ayaa soo ifbaxaysa, ha ahaato magaca, mabaadi'da ama nuxurka magaca la sheegay awgood.
Taasina waa halka caqabadda naqshadeeyaha: hel inta ugu badan ee suurtogalka ah in la abuuro in kasta oo ay jiraan tiro xaddidan ah. Habka loo adeegsaday in lagu xoojiyo aqoonsiga iyo astaanta astaanta ayaa ugu dambeyn door muhiim ah ka ciyaari doonta guusha astaantaas aadka u weyn. Taasi waa meesha ay suurtagal ka tahay soo bandhigida hal-abuurka iyo ku-ciyaarista ururka qaab ay suurtagal u tahay helitaanka aragtida booqdaha.
Midka midhihiisu yahay miraha fekerka qotada dheer iyo tiro badan oo tijaabooyin hore iyo ikhtiyaarro ah, kiiskeyga, had iyo jeer wuxuu door bidaa inaan sameeyo tiro aan xad lahayn sawir Sababtoo ah inay tahay habka ugu dhaqsaha badan uguna waxtarka badan ee lagu heli karo natiijada la rabo (waxaan kaga hadli doonnaa boostada mustaqbalka), waxay ka sarreyn kartaa urur ka sarreeya tartankiisa maxaa yeelay waxay qabataa dhammaan indhaha dadweynaha.
Waana suurtagal isku dhafka rajada iyo hal abuurka Waxay noqon kartaa fure u ah guusha astaanta, ha ahaato mid loogu talagalay ujeedada la doonayo, codsashada ururka, taabasho lama filaan ah iyo ciyaar u horseedda booqdaha inuu soo indho indheeyo geesaha aan la soo booqan lahayn iyadoo aan la faragelin naqshadeeye. Abuuritaannada ku dhiirrigeliya dadweynaha inay qaadaan tallaabooyin iskaa ah sababo la xiriira taabashada shakiga lagu dabaqay naqshadeynta iyo dib u wareejinta qaybaha naqshadeynta bogga.
Sidoo kale waa in la xasuusnaadaa in aan loo isticmaalin cunsurro ama go'aano kala fogeyn kara koox adeegsadeyaal ah, xaaladdan oo kale, xitaa xaddidaadaha iyo filashooyinka waa in laga tagaa si loo gaaro tiro badan oo soo booqdeyaal ah iyadoo lagu xallinayo waxyaabahaas wax u dhimi kara ama dhaawici kara ururka hal dhinac ama mid kale.
Muhiimadda jawaab celinta
Si kastaba ha noqotee, dhamaadka, hubaal in wax kasta oo laga wada hadlay ay ku jiraan asalka mar haddii astaanta iyo hal-abuurka horeyba loo sameeyay. Tani waa sababta oo ah waxa ugu muhiimsan ee geeddi-socodka oo dhan ayaa ah taas -celin soo saaray, hubaal miyir la'aan, booqde kasta. Taasina waa in kuwan, haddii ay leeyihiin shuruudo garaaf ah iyo in kale, waxaa saameyn ku yeelan doona ku darista wakiil cusub iyo iskuxirka 'shaabadda' urur dhan. Waana sababtaas sababta loo dhaliilay dhaleeceyntan, la soco kuwa booqdayaasha ah ee sida xun uu u saameeyay isbeddelka oo u soo bandhigay muuqaal cusub oo hagaagsan oo ah wixii ay fahmeen ilaa maanta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » logos » Muhiimadda astaanta u leedahay qaabeynta bogga
Sidee loogu guuleystaa macmiil adag?
Midab midab leh oo shaqo ku habboon